Mos Speedrun 2 yemahara kekutanga nguva | IPhone nhau
Mos Speedrun 2 yemahara kekutanga kubvira payakarova iyo App Store
Sezvatakambotaura pazviitiko zvakasiyana, hazvidi kuti mutambo uve nemifananidzo yakanaka kwazvo kuti inakidze uye nekudaro yakanaka. Semuenzaniso, ndakasekwa naSlayin, mutambo une michina yakapusa uye 8-bit mifananidzo ine kunakidzwa kwatisingakwanise kunzwisisa kusvikira tambotamba kwechinguva. Ini ndingati zvakafanana nezve mutambo watiri kutaura nezvazvo nhasi. Ndezve Mos Speedrun 2, zita rekuti panguva yekunyora iri mahara kwenguva pfupi.
MuMos Speedrun 2, sekureva kunoita zita, isu tinofanirwa kumhanya nekukurumidza. Kune rimwe divi, tinogona kutaura kuti iri Runner imwe yeaya andakashoropodza zvakanyanya pane dzimwe nguva, asi ine chimwe chakasiyana: isu tinogona dzora kwayinomhanyira protagonist. Kwandiri izvi zvakakosha nekuti ndisu tinosarudza kwatinofamba, kwete semimwe mitambo patinongofanira kubata sikirini kuti vasvetuke.
Dhawunirodha Mos Speedrun 2 yemahara kwenguva yakati rebei
Sezvo mune vamwe Vamhanyi, muMos Speedrun 2 isu tichafanirwa kudaro kukurira zvipingamupinyi uye unganidza mari, asi ine chimwe chinhu chinonakidza: hatifanire kumhanya takasununguka, kana tikasaita nzira yedu nekukasira kusvika pamberi pevamwe vamhanyi. Mune mamwe mazwi, isu tiri kumhanyisa vamwe vashandisi, vane mavara avo vatinoona se "chipoko." Chinhu chakanaka pamusoro peizvi ndechekuti, zvine musoro, isu tinoda kuhwina mujaho uye, zvakare zvine musoro, nekukurumidza kwatinoenda, ndipo patino gumburwa nezvipingaidzo.
Kunyangwe kunze kwekusimudzira haisi mutambo unodhura, zviri nani kurodha pasi ikozvino sezvo rave remahara, riibatanidze kuApp ID yako wobva wafunga kuti woisiya pane yako iPhone, iPod Touch kana iPad kana kuisunungura. Ini ndinofunga ndichaisiya ichiiswa, zvirinani kusvikira ndarasikirwa nemadzinza akati wandei kupokana ne "zvipoko" zvevamwe vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mos Speedrun 2 yemahara kekutanga kubvira payakarova iyo App Store
Fiat Chrysler inogadziridza iyo multimedia nzvimbo yemota dzayo dzekare kuti iwirirane neSiri Eyes Mahara